လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမည်သို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သင့်သနည်း Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 7, 2018 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 7, 2018 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာအပေါ်ကျနော့်အမြင်မကြာခဏငါ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သီအိုရီအရဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖောက်သည်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်အရမျှော်လင့်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ အဖြစ်မှန်သော်လည်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများအတိုင်းအသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်မိသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေခဲ့သည်။ ပါးနပ်သောဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူများကိုအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပျက်စီးစေသည့်စက်ရုပ်တုံ့ပြန်မှုများသည်၎င်းကိုမကူညီနိုင်ပါ။ အခွားသောအချိန်များ, အမှတ်တံဆိပ်ပြtheyနာကိုအများပြည်သူဖိုရမ်၌ဖြေရှင်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုမမွငျနိုငျသောကြောင့်သူတို့တတ်နိုင်သမျှကောင်းကျိုးများကိုပေးသည်။
ဒီကနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်ကရောက်လာတယ် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုသည်ဘယ်တော့မျှအရေးကြီးသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များထံမှထင်ရှားကျော်ကြားရန်လိုအပ်သည်၊ မေးခွန်းများနှင့်မေးမြန်းချက်များရရှိရန်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်သူတို့သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ အကောင်းဆုံးလုပ်ရန်မှာလူမှုမီဒီယာတွင်ဖြစ်သည်။
TollFreeForwarding.com ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင့်လျော်စွာအမည်ပေးထားသည်။ လူမှုမီဒီယာစီးပွားရေးလောကဝတ်။ ငါတကယ်ကသူတို့အသုံးအနှုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုကြိုက်တယ် လောကဝတ် အစားမဟာဗျူဟာ, အစီအစဉ်ကို, ဒါမှမဟုတ်လမ်းညွှန်ထက်။ လောကဝတ်၏အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး အထူးသအလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအကြားယဉ်ကျေးအပြုအမူ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းကုဒ်။ စန်း! လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မည်သို့စောင့်ကြည့်မည်၊ မည်သို့တုန့်ပြန်မည်၊ မည်သို့မြှင့်တင်မည်ကိုမျှော်လင့်နေသည်။
Facebook က - သင်၏ Facebook Page မှတဆင့်တောင်းဆိုမှုတိုင်းကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ပါ။ hashtag တွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့၊
Instagram ကို - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်ဇာတ်ကြောင်းများကိုသုံးပါ။ နောက်ကွယ်မှသင့်လုပ်ငန်းကိုကြည့်ပါ။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်တသမတ်တည်းရှိပါ။ စစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာများသည် အသုံးပြု၍ hashtag များကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုပါ။
တွစ်တာ - ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာများလိုလူမှုမီဒီယာထုတ်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်းကိုသုံးပါ။ Agorapulseသင့်ရဲ့ tweets တွေကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်၊ တန်းစီရန်နှင့်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ရန်။ Autoresponders များကိုရှောင်ပါ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းခေါင်းစဉ်များနှင့် hashtag များနှင့်တုံ့ပြန်ပါ။
Youtube ကို - စိတ်ကြိုက်ရုပ်ပုံများဖန်တီးရန်၊ ခေါင်းစဉ်ကဒ်များကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်ထပ်ဆင့်ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောဗွီဒီယိုများမှတဆင့်သင်၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းရန်အားပေးပါ။
Pinterest - သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်သြဇာရှိသူများမှအကြောင်းအရာများကို pin လုပ်ပါ။ သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်အောင်လုပ်ပါ - Pinterest ကိုထည့်ပါ ဒါဟာ pin ခလုတ်ကို။
LinkedIn တို့ - သင်၏အီးမေးလ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုအလိုအလျောက်မပေးသွင်းပါနှင့်။ စင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုတည်ဆောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပါ။
ဤတွင်အလွန်ကြီးစွာသော infographic ပါပဲ Social Media Business Etiquette - မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများကိုရနိုင်သည်.
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စီးပွားရေးလောကလောကဝတ်Facebook ကfilter များhashtags ကိုinstagramlinkedinpin လုပ်ပါPinterestလူမှုမီဒီယာလောကဝတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခေါင်းစဉ်တွစ်တာyoutube က